Nagarik News - नेपाली हुनुमा गर्व छ
धोती र टोपीबीचको लडाइँले हामी सबै नेपाली एक दिन धोती न टोपीको हुन्छौँ। वैशाखमा ठूलो भूकम्प गयो, विश्वभरका मानिसले हामीप्रति समवेदना प्रकट गर्दै सहयोग गरे। इतिहासकै त्रासदिपूर्ण त्यो दुखद् घडीमा कसैले यो सोधेन कि तिमी पहाडे हौ? मधेसी हौ? थारू हौ? दलित हौ? त्यति बेला एकमात्र भावना थियो हामीबीच– नेपालीको, मानवताको। टोलको चौरमा एउटै टेन्टमुनि पहाडे, मधेसी, बाहुन, दलित सबै मिलेर बसेका थियौँ, दुःख सुख मिलेर बाँडेका थियांै। के त्यतिबेला टेन्टमुनि एक भएर आश्रय लिएजस्तै हामी एक देशभित्र एक भएर बस्न सक्दैनौँ?
म कुनै दल वा पार्टीसँग सरोकार राख्दिन। म मानव हुँ, महिला हुँ, एसियन हुँ, साउथ एसियन हुँ, नेपाली हुँ, मधेसी हुँ, जनकपुरको यादव हुँ! म मानवताका लागि लडाइँ गरुँ कि जात र वर्गका लागि? ल तपाईं नै भन्नुहोस्, सकारात्मक सोचका लागि हामी तलबाट माथि जाने कि माथिबाट तल ओर्लने? मेरो मधेसीपन, मधेसी संस्कार, मधेसी संस्कृति र यादव थर कसैले खोसेर लान सक्दैन तर अरु धेरै कुरा छन् जो हराएर, बेचिएर, टुक्रिएर जान सक्छन्। मलाई मधेसी हुनुमा धेरै गर्व छ तर त्योभन्दा पनि बढी गर्व नेपाली हुनुमा छ।
आजकल कता–कता नेपालै नरहला कि भन्ने मलाई एकदमै चिन्ता हुन्छ। सबै जाति मिलेर बसेका छौं त्यही नै रमाइलो छ। एउटै टेबलमा दशथरि विचार आउनु त्यही राम्रो हो। तर, काटमार, गोलीगठ्ठा र द्वन्द्वले केही परिवर्तन आउँदैन्। विचारले मान्छे ठूलो हुने हो। राजनीतिले हामीलाई प्रभाव त पार्छ नै। म सामाजिक विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले पनि समाजमा राजनीतिको प्रभावबारे राम्रो जानकारी राख्छु। अहिले तराईमा भइरहेको घटनाले मन रोइरहेको छ। स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको नाममा देशमा कतै मानवीयता त हराएको छैन? जनतालाई ढाँट्ने, देश चिर्ने, जातीय विखण्डनतर्फ लाने, टुक्र्याउनेखाले काम अब पर सारौं। त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजबाट तिरस्कार गरौँ। संसार फैलने क्रममा भए पनि नेपाल भने खुम्चने क्रममा अघि बढिरहेछ। ल तपाईं नै भन्नुहोस्, विश्वमा फैलिने कि सानो सानो प्रदेशमा खुम्चने?
देश रहे न जनता रहन्छ, नेपाल रहे न नेपालीत्व रहन्छ। त्यसैले आज मेरो देश छ र त म छु। म नेपाली छु र त मेरो नेपाल देश छ। मेरो नेपाल, मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो। अब त एक होऔं हामी सबै नेपाली। केही गरौँ समाज अनि देशका लागि। मुलुक सत्य, शान्ति, अहिंसा र मेलमिलापको बाटोमा अगाडि बढेमात्र अहंकार, हिंसा, विध्वंश, भय, त्रास हराउँदै जानेछ। कसैले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र राजनीति गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ। एउटा जाति समुदायको मात्र नेता हैन, राष्ट्रको नेता बन्न कोसिस गर्नुहोस्। वंश र जातले मान्छे राम्रो/नराम्रो हुँदैन। उसको कार्यले मात्र हुन्छ। त्यसैले साम्प्रदायिक घृणालाई संस्थागत नगरौं। जीवनलाई सुन्दर फूलका रूपमा हेरौं।
तीन महिनायता देश इतिहासकै कठिन मोडमा छ। मधेसमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन चलिरहेको छ तर नागरिकको मागप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखिएन। के मधेसमा बगेको रगतको कुनै मूल्य छैन? के मधेसी नेपाली होइनन्? उनीहरुमा पनि नेपाली आमाकै रगत बगेको छ। रगत नेपालीकै हो चाहे त्यो हिमालमा बगोस्, मधेस वा पहाडमा बगोस्। यदि तपाईं सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो समय चूप लागेर बस्ने होइन। उत्पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउनु हाम्रो दायित्व हो, चाहे त्यो जुनसुकै वर्ग होस्।
हुन सक्छ, केही मधेसी मूलका नेताको सोच नेपाली छैन होला तर यो बुद्ध जन्मेको देशमा लासको राजनीति कुनै हालतमा सही छैन। १७ हजारले ज्यान गुमाए र अझै गुमाउँदैछन्। त्यसको बीउ रोप्नेहरुलाई के भन्ने? आन्दोलनमा मर्ने त आखिर सामान्य नेपाली जनता नै हुन्। भोलि यो आगो अन्त पनि नसल्केला भन्न सकिन्न। कहिले सिमाना, कहिले धर्म, कहिले जातका लागि नेपालमा कहिलेसम्म रगतको खोला बगाउने? यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास? मर्ने/मार्ने क्रमले समाधान हैन, देशलाई झनै समस्यामा धकेल्छ। त्यो कसैको हितमा छैन। अतः युद्ध होइन, बुद्ध मन लिएर सबै एकजुट भएर वर्तमान समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ।
मधेसी, पहाडी, हिमाली, जनजाति, महिला सबै नेपालका जनता हुन्। सबैका लागि लडौं, सबैलाई अंगालौं। नश्लवादी र क्षेत्रवादी सोचाइ देशको एकता र निष्ठाका लागि धेरै घातक थियो, छ र हुनेछ। हिजो के भयो भन्दा पनि आज के हुँदैछ र भोलि के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्›ित भए सबै क्षेत्र र वर्गलाई लाभ हुनेछ। प्रदूषित सोचाइबाट समाजलाई बचाउन जरुरी छ। त्यसैले जातीयता होइन, आत्मीयता खोजौँ। साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयता होइन, राष्ट्रियता रोजौँ।
समाजसेवा निस्वार्थ भावनाले समाज परिवर्तनका लागि गरिन्छ। त्यसैले आशा छ, मेरो सानो प्रयासले समाज केही परिवर्तन गर्न सक्छु होला। जसले अरुको दुःख देख्न सक्दैन, जसको हृदय अरुको दुःख देखेर ›वित हुँदैन, त्यो मानिसले मानवीय गुण हराएको हुन्छ। मैले कल्पना गरेको समाजमा पुग्न धेरै कोसिस गर्न बाँकी छ। त्यसैले मेरो कोसिस जारी रहनेछ। आज यो देशलाई पदको महत्व नराख्ने महात्मा गान्धी, मदर टेरेसा, मार्टिन लुथर किङ्ग जस्ता नेता आवश्यक छ। मसँग थुप्रै विकल्प थिए तर मैले पैसाभन्दा आवेग रोजेँ। उदासीनताभन्दा सहानुभूति रोजेँ। मैले तीक्ष्णता भन्दा प्रेम रोजंेँ। घृणाभन्दा मुस्कान रोजेँ। आफ्नो खुसीका साथै एक गरिब दुःखीको ओठमा मुस्कान हेर्ने चाहना र मेरो कोसिस सधैँ रहनेछ र त्योभन्दा पनि बढी उनीहरुको मुस्कानको कारण बन्न चाहन्छु।